Special ထူးထူးခြားခြား အရမ်းမိုက်တဲ့ The Legend of Tarzan (2016) ရုံတင်ကားသစ်ကြီး The Legend of Tarzan (2016) HD ~ ဘလော့ခရီးသည်
Special ထူးထူးခြားခြား အရမ်းမိုက်တဲ့ The Legend of Tarzan (2016) ရုံတင်ကားသစ်ကြီး The Legend of Tarzan (2016) HD
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ငယ်ငယ်က ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ Tarzan ဇာတ်လမ်းရဲ့ အဆက်လို ပုံစံမျိုး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဖရိက တောတွင်းမှာ မိဘတွေဆုံးပါးသွားလို့ မျောက်ဝံတွေရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ John Clayton လို့ခေါ်တဲ့ တာဇံဟာ တောတွင်းကိုရောက်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်ပြီး အာဖရိက တောကိုစွန့်ခွါကာ သူ့မိဘအိမ်ရှိတဲ့ အင်္ဂလန်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး လူသားဘဝအဖြစ် ပြောင်းလဲနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လ်ဂျီယံဘုရင် Leopold ၏ ဖိတ်ခေါ်မှုနှင့် Clayton နှင့် သူ၏ဇနီးတို့မှာ အာဖရိကတောသို့ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယုတ်မာတဲ့လူတစ်စုကြောင့် ဘာတွေဘယ်လို ကြုံရမလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်သာ ကြည့်ရှုပေးတော့ဗျာ။
ဒီဇာတ်ကားလေး ဆိုရင်ဖြင့် လက်ရှိထိ IMDb Rating 7.1 နေရာ
ရရှိနေတဲ့ ဇာတ်ကားလေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်ကားအမည်၊The Legend of Tarzan ဒါရိုက်တာ၊David Yates စာရေးဆရာ ၊Adam Cozad အရည်အသွေး၊ အကြည်
Subtitle ၊ English File size ၊ 756.99MB
Watch And Download !!! ဆိုတာကို
နှိပ်ပြီး ကြည့်ရှု ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်.။
Download From Here !!!